3d ပုံနှိပ်ပါဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာ, Petg ဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာ, ABS ပလတ်စတစ်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ - Lanbo
PLA နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ 2KG
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများက Black (လိမ္မော်ရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများက Black (ပန်းရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများက Black (ခရမ်းရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများက Black (အနီရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများက Black (အဖြူရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ (အလင်းပြန်မှုအဝါရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ (လိမ္မော်ရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ (ပန်းရောင်)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ (ခရမ်းရောင်အနီ)
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ (အနီရောင်)
2011and စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ Ltd.was တွင်တည်ရှိသည် Cixi lanbo ပုံနှိပ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ CIXI, NINGBO, Zhejiang,
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 2000square မီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် 100 အန်ထမ်းရှိပါတယ်။
3D ပစ္စည်းစိတ်ဝိညာဉ်၌ပုံနှိပ်သလဲ? သငျသညျကိုယူ ...
လူအတော်များများ 3D နေဖြင့်ပုံနှိပ်လှပသေးငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုအားဖြင့်ဆွဲဆောင်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး 3D ပုံနှိပ်အာရုံစိုက်။ ထို့ပြင်အချို့မိတ်ဆွေများကို 3D ပရင်တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ဂရုစိုက်မည်, နှင့် 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအများဆုံးကိစ္စများတွင်လျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့, 3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများနိုင် ...
3D ပုံနှိပ် mater ၏တရုတ်ပစ္စည်းကိုသိ ...
တရုတ်ပလပ်စတစ်လျှင်အတော်များများဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဆွေများကငါ့ကိုမေးနေတာပါလား? ဤတွင် PLA ယနေ့ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းကြမ်းတမ်းဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ polylacticacid: PLA အဖြစ်ကျမ်းစာလာသည်နှင့် polylactic အက်ဆစ်၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Polylactic အက်ဆစ် (PLA) ကိုအဆိုပြုထားကစီဓါတ်ကုန်ကြမ်းကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဝတ္ထု biobased နှင့်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါ 3D ပုံနှိပ် ele အတွက်မဆိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပါသလား ...
3D ပုံနှိပ်နည်းပညာအလွှာအားဖြင့်အရာဝတ္ထုအလွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ print ထုတ်တို့အားဤသို့သောအမှုန့်သတ္တုသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အဖြစ် bondable ပစ္စည်းသုံးပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါကနည်းပညာ, လက်ဝတ်ရတနာ, ဖိနပ်, စက်မှုဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေး, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏နယ်ပယ်များတွင် application များရှိပါတယ် ...